के भयो चर्चित कलाकार आशा खड्कालाई ? आशाको यो अवस्था देखेर आमा भक्कानिइन – Gazabkonews
के भयो चर्चित कलाकार आशा खड्कालाई ? यो दृश्य उनले अभिनय गरेको पुष्कल शर्माको भिडियोबाट लिइएको हो । हेर्नुहोस् भिडियो
चर्चित नायिका प्रियंका कार्कीले मध्यरातमा दिइन् छोरीलाई जन्म, मध्यरातमा ब्यथा लागेर आकस्मिक अस्पताल लगे आयुष्मानले, छोरी जन्माएलगत्तै आयुष्मान लाइभमा आएर प्रियंकालाई देखाए, बच्चा जन्मिएपछि पनि कराउन नछाड्ने भए यि दुई, भिडियोमा हेर्नुहोस् कत्ति सुन्नर छिन् प्रियंकाकी छोरी, आयुष्मान भन्छन् छोरलाई त हिरोइन बनाउँदिन
चर्चित गायिका तथा एमालेकी नेतृ कोमल वलीले यि ह्याण्डसमसँग गर्दैछिन् विबाह, भन्छिन् मलाई मिल्ने कान्छो पति पाएँ, जे हुन्छ अब हुन्छ, रमाउनेहो एकबारको जुनिमा मस्ति पनि अब गर्ने हो, हेर्नुहोस् भिडियो
अभिनय गरेरै राम्रो आम्दानी गरिरहेकी कालीबुढीलाई के भयो फेरी ? रुँदै हिँड्नु पर्ने अवस्था कसरी आयो ? यो दृश्य टेलिशृखला सौतेनी आमाबाट लिइएको हो । हेर्नुहोस् पूरा भिडियो